Banking | Top Slot Site | famba & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
Usati rubatso nokuda kutamba mari chaiyo, unofanira kunyoresa uye Login. Nokuti mumwe nomumwe nzira mubhadharo, uri kupiwa mirayiridzo hwakadzama. Unogona zvakare sika neyake nokuti nechimwe vaifarira kwadzinoita vachibhadhara. Kutevera pazasi matanho kuti rubatso kuchikwama chenyu:
.Click on "keshiya" kuvake uye sarudza Deposit nezvechisarudzo.
.Sarudza dhipozita muoti.
.Pedzisa chimiro chokuita wasarudza dhipozita nzira, uye tinya Deposit.
.Vaifarira kwadzinoita muripo zvichabviswa mhosva uye nhoroondo yako rwunoverengerwa.
.A tsamba yekusimbisa chokuita kuti kutengeserana mashoko yakatumwa.
kwenyu rwezvemabhengi mashoko ose zvachose vakachengeteka sezvo TopSlotSite anoshandisa azvino encryption uye kudzivirirwa Software.
sevhisi All mari paIndaneti kwaitungamirirwa TopSlotSite anopiwa no olor Management Limited. Click pano kuziva zvakawanda.
Player zvausingakwanisi uye dzokubudiswa tinya pano.
Below ndapota kuwana theTopSlotSite Payment Method Table. Nokuti mirayiridzo yakakwana chokuita nechimwe mubhadharo nzira, tinya nzira chiratidzo. Pamusoro pe, munogona mberi chero Gadzira Akaunzi kubatanidza kuvhura nyaya itsva kuMudzidzisi mubhadharo nzira.
.Fast multi-mari kutengeserana uchishandisa Debit yenyu / Credit card.
.Mari dziri pakarepo anowanika enyu TopSlotSite nhoroondo kamwe Kutamiswa
.aiteerera zvizere Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
.udza mashoko & tsigira: chero nyaya pamusoro makadhi chikwereti / debit wako, tapota taura tinotsigira.
.Sei mari: Mari kwandiri anogona akaita kushandisa Credit yenyu / Debit kadhi.
NETeller ndiye kutsanya uye yakachengeteka zvikuru paIndaneti kutengeserana basa Akakubvumidza ndokuchiisa mari pakarepo muruoko rwako TopSlotSite nhoroondo.
.Kushaya hanya nguva ipfupi kuti 24 maawa VIP nevatambi.
.NETeller anopa 24/7 Customer Support
.Website:www.neteller.com mumitauro yakawanda (ChiJapanese, ChiJerimani, ChiDanish, ChiSpanish, ChiFrench, ChiItalian, Turkish, ChiSwedish, ChiPolish).
.Freephone: (+) 800-7767-6343 (Ositireriya, Ositiriya, Bherujiyamu, China, Dhenimaki, Finirendi, Furanzi, Jerimani, Hong Kong, Ayarendi, Itari, Japani, Macau, Netharenzi, Noweyi, Putugaro, Singapowo, Speini, Taiwan, UK)
.Sei mari: Unogona mari yako NETeller nhoroondo uchishandisa zvinotevera nzira: Kadhi rechikwereti (Cary mari dziri kupatsanurwa nenguva chaiyo, kukupai pakarepo kuwana mari yako!), Online Check (EFT), InstaCASH, uye Bank Wire.
.Internet Banking: vamwe mabhanga vanobvumira vatengi vavo kubvisa mari zvakananga kubva yavo paIndaneti akaundi kupinda kwavo NETeller nhoroondo. Bvunza mubhengi yenyu zvakawanda.
.Kuchengetesa kusvika $250 pamusoro Nhoroondo kunyoresa uye kuti $2500 pamusoro simbiso pamahombekombe wako nhoroondo mashoko.
.Skrill ndiro zita idzva nokuda Moneybookers, yakavanakira pose muripo webasa kuti uyevo mari pamusoro Internet.
.Vemunyika basa pamwe 12 vakatsigira mitauro mudzimba kubhadhara iwayo pamusoro 30 nyika.
.Zvimwe mabasa akadai kutumira SMS uye faxes.
.udza mashoko & tsigira:
.Sei mari: Register chikwereti / debit kadhi uye pamahombekombe yenyu yose mashoko pamwe Moneybookers uye kuzvishandisa kubhadhara panguva pamusoro 20,000 paIndaneti zvitoro. Izvi zvinoreva kuti haufaniri kupa navo nguva imwe neimwe uchida kutenga paIndaneti zvinhu uye mabasa.
UKash muripo webasa kuti anoshandisa akagadzirira-to-vanopedza vouchers ine 19-digit romutemo. Unogona kutenga UKash vouchers paIndaneti kana mari kana makadhi pane zviuru yenzvimbo dzakadai kuzvitoro omunharaunda uye nhau nevasori, ipapo shandisa vhocha kubhadhara zvinhu uye mabasa (apo akagamuchira). Haufaniri kunyoresa kana kupa chero pachavo mashoko. Haufaniri kunyange vanoda rokubhengi.
.Ona zvimwe panguva www.ukash.com
.Kubhadhara Via UKash, Zvinongoreva kusarudza Ukash pfungwa kubva keshiya muna TopSlotSite . Zvadaro kupinda 19-digit bumbiro uye kukosha vhocha. Your payment is accepted immediately.
.Unogona kushandisa UKash kuti chete kubhadharwa £ 5 £ 200 (kana noenderana). Sezvo ku- hapana "nhoroondo", no further payments can be taken from you. When you want to pay again, kungosimuka zvakawanda Ukash.